UCharles Perrault: i-biography nezindaba zezingane ezihamba phambili | Izincwadi Zamanje
UCharles Perrault ungumbhali osevele eyingxenye yobuntwana bethu, yomlando, wokulandwa kwendawo yonke. Ezakhe ngezinye zezindaba zezingane ezidume kakhulu nezingenasikhathi, yize iqiniso lalo mbhali waseFrance lihlala ligxile kakhulu ebukhosini kanye "nezwe langempela" kunenganekwane. Impilo nomsebenzi kaCharles Perrault Akugcini ngokuthakazelisa ngokomlando, kepha futhi uma kukhulunywa ngokuqonda umlingo owaguqula unaphakade amandla okuxoxa izindaba.
1 UCharles Perrault: umxoxi wezindaba eNkantolo
2 UCharles Perrault: Izindaba Zakhe Ezimfushane Ezihamba Phambili
2.1 Ukukhuthazela okuhle
2.2 Itende lokugibela elincane elibomvu
2.3 Intshebe eluhlaza okwesibhakabhaka
2.4 Ikati elinamabhuzu
UCharles Perrault: umxoxi wezindaba eNkantolo
UCharles Perrault wazalwa ngoJanuwari 12, 1628 eParis, esifubeni somndeni wonxiwankulu ubaba wakhe wayengummeli ePhalamende, okwamvumela ukuba ajabulele impilo eyilungelo. UPerrault wazalwa ngesikhathi sokuzalwa okuphindwe kabili iwele lakhe, uFrançois, lashona ezinyangeni eziyisithupha ngemuva kokuza emhlabeni.
Ngo-1637 wangena eKolishi laseBeauvais, lapho akhombisa khona ikhono elihle ngezilimi ezifile. Ngo-1643 waqala ukufundela ezomthetho ukuze alandele ezinyathelweni zikayise nomfowabo, uPierre, umqoqi jikelele kanye nomvikeli wakhe omkhulu. Futhi ukuthi kusukela esemncane kakhulu, uPerrault wakhombisa ikhono elihle lezifundo, lokhu kwaba yinto ephambili kuye kakhulu empilweni yakhe yonke.
Ngo-1951 waphothula iziqu zeBar Association kwathi eminyakeni emithathu kamuva waba yisikhulu ohlelweni lukahulumeni. Phakathi kweminikelo yakhe yokuqala, umbhali wabamba iqhaza ekwakheni i-Academy of Sciences kanye ne-Academy of Arts. Kodwa-ke, yize wayenesikhundla emkhakheni wezepolitiki nobudlelwano bakhe nobuciko, uPerrault akazange aphikisane nalolu hlelo futhi akazange anikeze nezimpawu zokucabanga ukuthi izindaba zakhe zazizovusa eminyakeni edlule. Impilo yakhe yayilinganiselwe ukufeza umsebenzi wakhe nokuhlonipha iNkosi uLouis XIV ngendlela yezinkondlo nezinkhulumomphendvulwano, okwamenza wanconywa izindawo eziphakeme kanye nesikhundla sokuba ngunobhala weFrench Academy ngo-1663 ngaphansi kwenduku yomvikeli wakhe omkhulu, uColbert, umeluleki kuLouis XIV.
Ngo-1665, wayezoba esinye sezikhulu zasebukhosini. Ngo-1671 waqokwa waba yiShansela leSikole futhi washada noMarie Guichon, owathola indodakazi yakhe yokuqala ngo-1673. Ngawo lowo nyaka waqokwa waba uMtapo Wezincwadi weSikole. Ubuye waba nezinye izingane ezintathu, washonelwa ngumkakhe ngemuva kokuzalwa kowokugcina, ngo-1678. Eminyakeni emibili kamuva, uPerrault kwadingeka ashiye isikhundla sakhe endodaneni kaColbert, umzuzu owawuzobonisa ukuguquka kwakhe aye engxenyeni yombhali wezingane isihloko esikhulu bekungukuthi Izinganekwane zakudala, ezaziwa kangcono njengezinganekwane zikaMama Goose. Ngaphandle kokubhala zonke lezi zindaba ngo-1683, zazingeke zishicilelwe kuze kube ngu-1697.
Eminyakeni yakhe yokugcina yokuphila, uPerrault wazinikela ekubhaleni ama-odes ebukhosini, inkosi yaseSweden, iSpain futhi ikakhulukazi uLouis XIV. Wayinikezela kuye le nkondlo El Ikhulu LikaLouis Omkhulu, okwadala isidumo esikhulu ngemuva kokushicilelwa kwayo ngo-1687.
UCharles Perrault ushone ngoMeyi 16, 1703 eParis.
UCharles Perrault: Izindaba Zakhe Ezimfushane Ezihamba Phambili
Yize ingxenye yomsebenzi wakhe wokubhala (kufaka phakathi imisebenzi yakhe engama-46 eyashicilelwa ngemuva kokufa) wakhuluma ngamakhosi, iNkantolo kanye nesimo sezepolitiki, Izindaba zezingane zikaPerrault ahlanganisa imikhuba yokuziphatha umbhali ayibona iyadingeka ezikhathini zeziyaluyalu njengalezo zekhulu le-XNUMX leFrance.
Ama-Ogres, ama-fairies, amakati aphethwe ngamakhosi namakhosazana aqala ukudonswa ekhanda lakhe ekhuthazwe yizindaba ezazisakazwa phakathi kwamakilasi aphezulu njengefa lomlomo ovela kwamanye amazwe aseYurophu futhi amanye angavamile. Ngokulandelayo, izilungiselelo zangempela ebezivame ukuvakashelwa ngumlobi, ezifana nenqaba yase-Ussé, emnyangweni we-Indre neLoire, bekungakhuthaza izindaba ezinjengeSleeping Beauty.
Incwadi eqoqe ingxenye yalezi zindaba ibinesihloko esithi Ama-Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités enesihloko esithi Contes de ma mère l'Oye esembozweni esingemuva. Umthamo wawuqukethe izindaba eziyisishiyagalombili, edume kakhulu nguCharles Perrault:
Inganekwane edumile yeNkosazana u-Aurora, egwetshwe ukulala unomphela ngemuva kokuhlatshwa ngosonta, iye yaba enye yezindaba ezingaphelelwa isikhathi emlandweni. UPerrault udwebe i- ukulala inkosazana inganekwane Okuphindaphindwayo ezindabeni zakudala ze-Icelandic noma zaseSpain futhi kungeze ukuthinta okuhlekisayo nokuqondayo.
Itende lokugibela elincane elibomvu
Indaba yendodakazi efake isigqoko esibomvu eyagijimela impisi isendleleni eya kwagogo yavela inganekwane evela ezikhathini zasendulo ukumaka umehluko phakathi komuzi nehlathi. UPerrault ucindezele imininingwane ebabazekayo (njengesimemo sempisi kuLittle Red Riding Hood ukuzoshwabadela izinsalela zikagogo wakhe) isimilo sabo bonke abesifazane abasebasha uma kuziwa ekubavimbeni ekuhlangabezaneni nabantu abangabazi.
Intshebe eluhlaza okwesibhakabhaka
Ukulandisa okuncane kakhulu kwezinganekwane zikaPerrault kubhekiswe kowesifazane othole izidumbu zamakhosikazi omyeni wakhe omusha enqabeni embi. Yize umlando wesithabathaba somuzi obabazekayo nomyeni ongaqondakali usuka ezinganekwaneni ezifanayo zamaGrikhi, kukholakala ukuthi uPerrault uphefumulelwe yizibalo ezifana nombulali obulalayo UGilles de Rais, isikhulu saseBreton sekhulu le-XNUMX.
Ikati lendodana yomgayi elishiya ifa lalo lonke emva kokufa liba yisisekelo sale ndaba ehlekisa kakhulu okuchazwa kwayo kusaphakamisa impikiswano engaphezu kweyodwa. Abanye bathembele kumcabango wokuthi ikati elenziwe njengomuntu elaliqhuba ibhizinisi laliyisifundo ekuphathweni kwebhizinisi, kanti abanye bakhomba isilwane esiboshiwe njengesifaniso sezilwane zabantu.
Zimbalwa izindaba ezidlule ngesikhathi esiningi njengalezo ze- Cinderella, intokazi eyayikhonza usingamama wayo kanye nodadewabo ababili abafisa ukushada nenkosana. Indaba iveze umqondo omdala kunayo yonke emhlabeni: ukulwa okuhle nokubi, indikimba ebivele ikhona kwenye yezinguqulo zokuqala zomlando ovela eGibhithe lasendulo.
UThumbelina wayenguthunjana ezinganeni eziyisishiyagalombili. Inzuzo enkulu eyamvumela ukuthi azifihle emabhuzwini e-ogre owayefuna ukuwadla wonke. Isingathekiso leso sayizi asinqumi inani lomuntu.
Ezinye izindaba ezimbili ezifakwe encwadini zaziyi Ama-fairies kanye neRiquet enepompadour, akwaziwa kangako. Ngokulandelayo, enguqulweni eyalandela yezinganekwane zikaMama Goose, yafakwa Isikhumba sezimbongolo, enye i-Perrault classic eyalahla izihlobo zocansi ngokuxoxa indaba yenkosi eyayifuna ukushada nendodakazi yayo.
Iyiphi indaba oyithandayo kaCharles Perrault?
Ubuwazi la Izindaba eziyi-7 okufanele uzifunde ngesikhathi sokuhamba ngaphansi komhlaba?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » UCharles Perrault: i-biography nezindaba zezingane ezihamba phambili
Uyazi uhlelo lwendlu yokushicilela yase-Edhasa, yinhle kakhulu ekuqoqweni kwayo kwezincwadi ze-GREASURE, isimanga
I-athikili enhle, ngiyithande kakhulu. Ngicabanga konke, Ukulala Ubuhle kuyintandokazi yami. Bheka ukushicilelwa kahle, kunezinye izinhlobo (1951 / suss). Sengiqalile ukukulandela, ibhulogi yakho yinhle.
UDaniela carmenn kusho
Izincwadi ezinhle kakhulu
Phendula uDaniela carmenn
Sawubona, ngiyaxolisa kodwa kunosuku lapho wenze iphutha "Ngo-1951 waphothula iBar Association"
Umbhali ovelele, kuyigugu ukukwazi ukujabulela imisebenzi ye-titan enjalo, nokuthi umyalezo wakhe uvumelana nezimo zanamuhla kuyisibonakaliso sokuthi uthokozele umbono omuhle kakhulu. Futhi yize izindaba zabo eziningi zilahlekelwa yingxenye yokuqukethwe ekuguqukisweni kwamafilimu, zisesisindo esingenakubalwa.
sawubona, ngingalisho kanjani leli khasi ngicela, angilutholi usuku elenziwa ngalo….